Koobka Dhismaha Mashruuca Wabiga Abay Oo Si Meeqaam Sare Ah Loogu Soo Dhaweeyay jigjiga - Cakaara News
Jigjiga,(cakaaranews),Axad, 10ka, December, 2017. Raisal-wasaaraha JDFI mudane hailemariam desalegn ayaa manaasabadii xuskii 12aad ee maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalkeena itoobiya ee lagu xusay caasimada deegaanka canfarta ee samara ku wareejiyay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar koobka dhismaha mashruuca wabiga dib u curashada dalkeena itoobiya ee abay.
Haddaba, waxaa maanta si qurux badan loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee garaad wiil-waal madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo wafti balaadhan oo uu hogaaminayay kuwaas oo waday koobka dhismaha mashruuca wabiga dib u curashada dalkeena itoobiya ee Abay. waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay masuuliyiinta sare ee xukumada DDSI, shaqaalaha dawlada, masuuliyiinta maamulka magaalada jigjiga, odayaal dhaqameedka deegaanka iyo qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan caasimada deegaanka ee jigjiga.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo qolka nasashada ee garoonka diyaaradaha kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay dadaalka balaadhan ee dalku ugu jiro sidii loo tir tirilahaa saboolnimada islamarkaana loo gaadhilahaa wadamada dhaqaala hoodu dhex-dhexaadka yahay madaxwaynaha ayaa sheegay in mashruuca wayn ee dhismaha wabiga abay uu ka mid yahay mashaariicaha lagu gaadhayo horumar waara oo joogtaysan oo aan soo noqod lahayn madaxwaynaha ayaa tilmaan dheer ka bixiyay sida ay xukuumada iyo shacabwaynaha DDSI ugu heelan yihiin taabo galinta iyo ka midho dhalinta mashruucan abay madaxwaynaha ayaa ugu dambayntii sheegay in koobkan maanta soo gaadhay deegaanka ay xilwayn iska saarayaan mudada uu yaalo deegaanka.
Koobkan oo si qurux badan galabta loogu soo wareejiyay wadooyinka waawayn ee caasimada deegaanka ee jigjiga islamarkaana qaybaha kala duwane ee bulshada siwayn usoo dhaweeyay ayaa waxaa lagu wareejiyay mayorka maamulka magaalada jigjjga mudane ibraahin maxamuud mubaarik. Koobkan oo muddo sanad ah lagu hayn-doona DDSI ayaa waxaa la soo marindoonaa dhamaan gobolada deegaanka.